गुण्डा नाइके समीरमानलाई किन लगियो मुस्ताङ ? | Khabar Express Tv
गुण्डा नाइके समीरमानलाई किन लगियो मुस्ताङ ?
खबर एक्सप्रेस 2018-10-02 मा प्रकाशित Total Shares: 135
काठमाडौं - गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका समीरमान सिंह बस्न्यातलाई गृह मन्त्रालयले मुस्ताङ कारागार सरुवा गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हत्यामा संलग्नको आरोपमा बस्न्यात पूर्पक्षमा छन् ।
नख्खु कारागारमा राखिएका बस्न्यातलाई एकाएक जीर्ण कारागार मुस्ताङ सरुवा गरिएपछि प्रहरी अधिकारी सशंकित भएका छन्् । जहाजमार्फत सोमबार पोखरा पुर्‍याई सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङ पुर्‍याइएको हो ।
दिनेश अधिकारी ‘चरी’ माथि गोली हान्नेमध्येका अम्मर राना बस्न्यात समूहकै हुन् । गुन्डा नाइके दावा लामालाई बस्न्यातकै निर्देशनमा गोली प्रहार गरिएको थियो ।
पटकपटक गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जोडिएका बस्न्यातलाई सुरक्षित कारागारमा राख्नुपर्ने भएपनि जीर्ण कारागारमा सरुवा गरिएको छ ।
अहिले मुस्ताङ कारागारमा ९ जना कैदीबन्दी छन् । ढुंगा र काठले बनेका दुईवटा कोठा छन् । कारागारमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाइएको छैन । तारबार लगाइए पनि फलाम जीर्ण छन् । ८ जना मात्रै प्रहरी बस्छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कारागार झण्डै १० किलो मिटरको दुरीमा छ । कारागारमा भवितव्य भइहाले तत्काल थप मद्दतका लागि प्रहरी पुग्न सजिलो छैन । कारागार नजिकै सेनाको ब्यारेक छ । बस्न्यातलाई मुस्ताङमा सरुवा गरिएको घटनालाई प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी सुरु गरेको छ ।